गोविन्द केसीले आज अवकास पाउँदै, अब के गर्लान ? « रिपोर्टर्स नेपाल
गोविन्द केसीले आज अवकास पाउँदै, अब के गर्लान ?
काठमाडौं २७ असोज । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै पटक पटक अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीले सरकारी सेवाबाट उमेरहदका कारण आज अनिवार्य अवकाश पाउने भएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा वरिष्ठ हाडजोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञका रुपमा उनी कार्यरत थिए। ६३ वर्षीया डा. केसीले आज सोमबारदेखि अवकाश पाउने अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रेमकृष्ण खड्गाले जानकारी दिए।
यस अघि डा. केसीको नागरिकता, एसएलसीको चारित्रिक प्रमाणपत्र र बढुवा फारममा फरक-फरक जन्ममिति भेटिएपछि विवादमा परेका थिए। डा. केसीको नागरिकतामा जन्ममिति २७ असोज २०१३ रहेको छ। सोही आधारमा नै अस्पतालले सोमबारदेखि अवकाश पाउने छन्।
आन्दोलन कायमै राख्ने अडान
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राखेर आन्दोलन गर्न थालेको सात वर्ष भएको छ। चारबुँदे माग राखेर ०६९ असार २१ मा उनी पहिलो पटक अनशन सुरु गरेका थिए। पछिल्लो पटक उनले १६ औं चरणको अनशन इलाममा बसेका थिए।
अवकाश पाएपछि पनि डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको आन्दोलनलाई जारी राख्ने संकेत दिएका छन्। डा. केसी निकट स्रोतका अनुसार अवकाश पाएको दिन अर्थात् सोमबार बिहान शिक्षण अस्पतालको गणेशमान सिंह भवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी सिफारिसका सम्बन्धमा विरोध जनाउँदै डा। केसीले दलीय भागवण्डा विरुद्ध अनशनको चेतावनी दिने बताइएको छ।
विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग डा. केसीको छ। पदाधिकारी नियुक्त प्रक्रियामा परासर कोइराला नेतृत्वको समितिले दिएका सुझाव कार्यन्वयन गर्नुपर्ने माग डा. केसीको छ।
एक महिनादेखि रिक्त रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि डा. भगवान कोइराला, डा. धर्मकान्त बास्कोटा र डा. चन्द्रमणि पौडेलको नाम सिफारिस भएको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित सर्च कमिटीले तीन सम्भावित उपकुलपतिको नाम सिफारिस गरेको हो। सर्च कमिटिले गरेको सिफारिसमा विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले थप अध्ययन गरेर नियुक्त गर्नेछन्।
नेकपा विभाजन टार्न महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने देखि मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनसम्मको सुत्र
काठमाडौं, २९ साउन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन फेरि नयाँ प्रस्ताव तयार गरिएको छ
सात लाख ४७ हजार मानिसको ज्यान लिने कोरोना, संक्रमितको संख्या दुई करोड आठ लाख नाघ्यो
काठमाडौं, साउन २९ । विश्वभर कोरोना सक्रमितको संख्या दुई करोड आठ नाघेको छ । विश्व
विहिबार यी ठाउँमा हुँदैछ भारी बर्षा
काठमाडौं, साउन २९ । हाल देशभित्रको अधिकांश भू–भागहरुमा समान्य देखि पूर्ण बदली रहेको छ भने
कोरोना सक्रमणबाट मृत्यु भएका ९१ जना को को (विवरणसहित)
काठमाडौं, २८ साउन । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आज थप आठ जनाको मृत्यु पुष्टि भएसँगै
विश्वको पहिलो कोरोना भ्याक्सिनप्रति कस्को विश्वास कस्को आशंका
एजेन्सी, २८ साउन । रुसले विकास गरी अनुमोदन गरेको विश्वको पहिलो कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन ‘स्पुतनिक
कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक आठ जनाको मृत्यु पुष्टि
काठमाडौं, २८ साउन । नेपालमा आज एकै दिन सर्वाधिक कोरोना भाइरसका संक्रमितको मृत्यु पुष्टि भएको
४८४ कोरोना संक्रमित थपिए
काठमाडौं, २८ साउन । नेपालमा कोरोना भाइरसका आज ४ सय ८४ जना संक्रमित थपिएका छन्
विरानगरमा थप २७ जनामा कोरोना पुष्टि
विराटनगर, साउन २९ । विराटनगर महानगरपालिकामा बिहीबार थप २७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ
भ्रष्टाचारी र भुमाफियालाई सचेत गराउन राखेको कुकुर बम डिस्पोज
कञ्चनपुर, साउन २९ । .कञ्चनपुरको भानुचोकमा प्रेसर कुकर बम भेटिएको छ ।बिहीबार बिहान दुई बजे
‘द रक’ यस वर्ष पनि सबैभन्दा महँगा कलाकार
काठमाडौं, साउन २९ । ड्वेन जोनसन अर्थात् ‘द रक’ यस वर्ष पनि सबैभन्दा महँगो पुरुष